Atemmufo 20 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
20 Enti Israelfo nyinaa fii adi,+ na asafo no boaboaa wɔn ano te sɛ onipa biako,+ fi Dan+ kosi Beer-Seba+ ne Gilead+ asase so, na wɔkɔɔ Yehowa anim wɔ Mispa.+ 2 Ɛnna Israel man ne mmusua no nyinaa mu atitiriw, asraafo mpem ahanan a wɔnam fam a wɔtwe nkrante,+ begyinaa nokware Nyankopɔn+ man asafo mu. 3 Na Benyaminfo tee sɛ Israelfo aforo kɔ Mispa.+ Ɛnna Israelfo kae sɛ: “Amumɔyɛde a ɛte sɛɛ fi he?+ Monka mma yentie.” 4 Afei Lewini+ a wokum ne yere no kae sɛ: “Me ne me yefam+ kɔɔ Benyaminfo kurow Gibea+ mu sɛ yɛrekɔpɛ baabi ada. 5 Na Gibeafo baa me so betwaa ofie a mete mu no ho hyiae anadwo no. Anka me na wɔrepɛ me akum me, na wɔfaa me yefam ne no dae+ ma owui.+ 6 Enti misoo me yefam no mu twitwaa no mu de kɔɔ Israel asase nyinaa so,+ efisɛ wɔabɔ ahohwibra+ ayɛ aniwude wɔ Israel.+ 7 Afei Israelfo, mo nyinaa monkyerɛ mo adwene na momma yɛn afotu+ wɔ ha.” 8 Ɛnna ɔman no nyinaa sɔre gyinae sɛ onipa biako+ kae sɛ: “Yɛn mu biara renkɔ ne ntamadan mu, na yɛn mu biara renkɔ ne fie.+ 9 Na nea yɛde bɛyɛ Gibea ni: Momma yɛmmɔ ntonto+ nkɔ ne so. 10 Israel mmusua nyinaa mu, yebeyi mmarima du afi mmarima ɔha biara mu, ɔha afi apem biara mu, apem afi mpem du biara mu, na wɔbɛma ɔman no aduan ma wɔakɔ Benyaminfo kurow Gibea so, efisɛ wɔayɛ aniwude+ wɔ Israel.” 11 Enti Israel mmarima nyinaa ka boom kɔɔ kurow no so sɛ onipa biako. 12 Afei Israel mmusua no somaa mmarima kɔɔ Benyaminfo+ nyinaa nkyɛn kɔkae sɛ: “Amumɔyɛde bɛn na wɔayɛ wɔ mo mu yi?+ 13 Munyi mmarima+ ahuhufo+ a wɔwɔ Gibea+ no mmra mma yenkum wɔn,+ na yenyi mmusu biara mfi Israel.”+ Nanso Benyaminfo no antie nea wɔn nuanom Israelfo reka no.+ 14 Na Benyaminfo no boaboaa dɔm ano fi wɔn nkurow mu kɔɔ Gibea sɛ wɔne Israelfo no rekɔko. 15 Enti saa da no Benyaminfo boaboaa asraafo mpem aduonu asia+ ano fii nkurow ahorow mu; ɛsono Gibeafo mmarima ahanson a wɔboaboaa wɔn ano no. 16 Dɔm yi nyinaa mu mmarima a wɔapaw wɔn ahanson yɛ abenkumma.+ Sɛ nhwi mpo sɛn hɔ a, wɔn mu biara betumi atow ɔbo+ atew a ɔmfom. 17 Wuyi Benyaminfo fi mu a, Israelfo mmarima a wɔboaboaa wɔn ano si mmarima mpem ahanan a wɔtwe nkrante.+ Ná wɔn mu biara aben wɔ ɔko mu. 18 Na Israelfo siim foro kɔɔ Betel kobisaa Onyankopɔn+ sɛ: “Yɛn mu hena na onni kan ne Benyaminfo nkɔko?”+ Ɛnna Yehowa kae sɛ: “Yuda nni kan.”+ 19 Afei Israelfo sɔree anɔpa, na wɔboaboaa wɔn ano sɛ wɔrekɔ Gibea so. 20 Na Israel mmarima fii adi sɛ wɔne Benyaminfo rekɔko, na Israel mmarima no hyehyɛɛ wɔn ho de ɔko no kohyiaa wɔn wɔ Gibea. 21 Saa da no, Benyaminfo no fi Gibea+ bekunkum Israelfo mmarima mpem aduonu abien guu hɔ.+ 22 Nanso Israelfo no de akokoduru san hyehyɛɛ wɔn ho kɔɔ faako a wɔkoe da a edi kan no. 23 Na Israelfo kosui+ wɔ Yehowa anim kosii anwummere, na wobisaa Yehowa sɛ: “Yɛnsan ne yɛn nua Benyamin nkɔko anaa?”+ Ɛnna Yehowa buae sɛ: “Monkɔ no so.” 24 Enti da a ɛto so abien no, Israelfo twiw bɛn Benyaminfo.+ 25 Na Benyaminfo fi Gibea behyiaa wɔn da a ɛto so abien no, na saa da no nso wokunkum Israel asraafo, mmarima a wɔtwe nkrante,+ mpem dunwɔtwe guu asase no so.+ 26 Afei Israelfo+ nyinaa, ɔman no nyinaa, foro kɔɔ Betel kosui,+ na wɔtenatenaa Yehowa anim dii mmuada+ kosii anwummere na wɔbɔɔ ɔhyew afɔre+ ne asomdwoe afɔre+ wɔ Yehowa anim. 27 Akyiri yi Israelfo kobisaa Yehowa,+ efisɛ saa bere no na nokware Nyankopɔn apam adaka+ no si hɔ. 28 Ná Aaron ba Eleasar ba Finehas+ na ogyina adaka no anim,+ na ɔkae sɛ: “Mensan nkɔ ne me nua Benyamin nkɔko anaa minnyae?”+ Ɛnna Yehowa kae sɛ: “Kɔ, efisɛ ɔkyena mede no bɛhyɛ wo nsa.”+ 29 Afei Israel maa mmarima kɔtɛw+ Gibea ho nyinaa hyiae. 30 Da a ɛto so abiɛsa no, Israelfo kɔɔ Benyaminfo so, na wɔhyehyɛɛ wɔn ho sɛ wɔne Gibeafo rekɔko sɛnea wɔyɛe kan no.+ 31 Na bere a Benyaminfo fii adi behyiaa dɔm no, wɔtwee wɔn fii kurow no mu.+ Na sɛnea wɔyɛe kan no, wɔtow hyɛɛ wɔn so kunkum nnipa no bi wɔ tempɔn a ɛkɔ Betel+ ne nea ɛkɔ Gibea+ no so. Israel+ mmarima bɛyɛ aduasa totɔe wɔ wuram. 32 Enti Benyaminfo no kae sɛ: “Wɔretotɔ wɔ yɛn nsa ano te sɛ kan no.”+ Na Israelfo no kae sɛ: “Momma yenguan,+ na yɛntwe wɔn mfi kurow no mu mmra tempɔn no so.” 33 Enti Israelfo nyinaa fii wɔn asoɛe kohyiaa Baal-Tamar, na Israelfo a wɔkɔtɛw+ Gibea+ mpɔtam no nso fii faako a wɔtɛw no bae. 34 Ɛnna mmarima mpem du a wɔapaw wɔn afi Israelfo nyinaa mu no baa Gibea anim, na ɔko no mu yɛɛ den, nanso na Benyaminfo no nnim sɛ asɛm rebɛto wɔn.+ 35 Na Yehowa de Benyaminfo+ no hyɛɛ Israelfo nsa ma wodii wɔn so nkonim. Enti saa da no, Israelfo kunkum Benyamin asraafo, mmarima a wɔtwe nkrante,+ mpem aduonu anum ne ɔha. 36 Nanso Benyaminfo susuwii sɛ wobedi Israel so nkonim, efisɛ na Israelfo no ama Benyaminfo kwan kɛse.+ Israelfo no yɛɛ saa efisɛ na wɔde wɔn ani ato wɔn a wɔakɔtɛw Gibea nkyɛn baabi no so. 37 Na wɔn a wɔkɔtɛwee+ no nyinaa bɔɔ twi kɔɔ Gibea.+ Afei wɔtow hyɛɛ kurow no so, na wɔtrɛw wɔn mu de nkrante kunkum wɔn nyinaa.+ 38 Saa bere yi na Israelfo ne mmarima a wɔkɔtɛwee no ahyehyɛ ho sɛ wɔbɛma wusiw afi kurow no mu aforo akɔ wim.+ 39 Bere a Israelfo dan wɔn ho wɔ ɔko no mu no, Benyaminfo tow hyɛɛ Israelfo bɛyɛ aduasa so kunkum wɔn,+ na wɔkae sɛ: “Nkogu ara na wɔredi te sɛ kan ko no mu.”+ 40 Wusiw no fi kurow no mu foro+ kɔɔ wim kumɔnn.+ Enti bere a Benyaminfo dan wɔn ani no, wohui sɛ ogya da kurow mũ no nyinaa mu ma wusiw ayɛ wim kumɔnn.+ 41 Ɛnna Israel mmarima no dan wɔn ho,+ na Benyaminfo no bɔɔ hu,+ efisɛ na wɔahu sɛ asɛm ato wɔn.+ 42 Enti woguan fii Israelfo anim de wɔn ani kyerɛɛ sare so, nanso akofo no taa wɔn, na mmarima a wofi kurow no mu reba no kunkum wɔn wɔ wɔn mu. 43 Wotwaa Benyamin ho hyiae,+ na wɔtaa no ma wannya ne ho atwaye.+ Wotiatiaa no so wɔ Gibea+ ntentenso wɔ apuei. 44 Enti Benyaminfo mmarima akatakyi+ mpem dunwɔtwe totɔe. 45 Afei wɔdan wɔn ho guan kɔɔ sare so, Rimmon+ botan so. Na wokunkum mmarima mpemnum wɔ atempɔn+ no so sɛ ntoso. Wɔtaa wɔn koduu Gidom, na wokunkum mmarima mpem abien kaa ho. 46 Saa da no, Benyamin asraafo, mmarima akatakyi a wɔtwe nkrante,+ a wowuwui nyinaa si mpem aduonu anum. 47 Na mmarima ahansia guan kɔɔ sare so, Rimmon+ botan so. Na wɔtenaa Rimmon botan no so asram anan. 48 Afei Israelfo no san baa Benyaminfo so na wɔde nkrante kunkum wɔn a wɔwɔ kurom nyinaa, fi nnipa so kosi mmoa so, na wɔsɛee biribiara a wohui.+ Na kurow biara a wohui nso, wɔde ogya toom.+